QABSOON ITTI FUFA; SABABNI ISAAS:
Date: March 23, 2016Author: Oromedia 0 Comments
Ajaja mootummaatiin warroonni lubbuu akka baatu ajajaniif kan baasan,lubbu balleesitoonni seeratti hanga hin dhiyaatinitti.
Hidhatoota mootummaatiin ukkuumsamanii lammiiwwan dhabaman eessa akka jiran hanga hin beekamneetti fi hanga gadi hin lakkifaminneeti.
Badii tokkon maleetti ummanni hidhaman yaadoo tokko malee hanga gadi hin dhiifamneetti.
Hidhatoota waayyaneetiin warreen midhamni qaamaa irra gahe beenyaan gahaan hanga hin kafalamneetti.
Mootummaafi ajajoonni waayyanee tigiraayi jeequmsa ka’eef hundeen ka’umsaa isaan ta’uu amananii hanga hin fudhanneetti.
Ummata ifaan ifatti warroonni arrabsanii fi kanneen ummata amala badaa dhaalchisan warroota du’an irratti,warroota mada’an irratti,warroota hidhaman irratti,warroota baqatan irratti,ummata midhaman irratti dhuunfaa fi maqaa dhaaboleetiin warri baacan dhiifama biyyooleessaa hanga hin gaafanneetti fi itti gaafatamummaa ummataas ta’ee hojji isaanii irra hanga gadi hin lakkifneetti.
Maqaaa misoomaa fi inveestimeentiitiin qabatama tokkoon maleetti lafa dhaabataa isaanii qotee bultoonni saamaman dhimmi lafa isaanii irra deebi’amee ilaalamee hanga murtiin seera qabeessi hanga itti hin laatamneetti.
Maqaa misoomaa fi inveestimeentiitiin ummata qotee bulaa lafa isaanii irraa buqisuu fi seeraa dawoo godhachuun labsiiwwaan lafa saamuu haal-duree tokko malee hanga hin jijjiramneetti qabsoon ummata oromoo itti fufa.
Previous Previous post: Jonaddii Saadoo Ummata Oromoo Dhiifama Gaafate
Next Next post: ‹‹ኦሮሞ ጀግና ነው!››